Qoraalka Kuxirida Google ee Maamulayaasha Websaydhada | Martech Zone
Arbacada, Oktoobar 24, 2012 Arbacada, Oktoobar 24, 2012 Douglas Karr
Waxaan isha ku haynaa xisaabaadka macaamiishayada. Maaha wax iska yimid, feker ahaanteyda, in macaamiisheennu ay si wanaagsan u kala sarreeyaan maadaama aan awood u leenahay inaan si weyn u aqoonsanno una yareynno khaladaadka ka soo baxa Webmasters-ka. Google wuxuu sii wadaa inuu horumariyo algorithms-kiisa ka baxsan isku dayga iyo runta ciyaaraha shirkado badan oo SEO ah ciyaaray waagii hore. Qoraalku wuxuu ka ciyaarayaa door sii kordhaya tan.
Adoo adeegsanaya safafka bulsheed ee caanka ah, Google waxay horumarineysaa bogaggooda algorithm waxayna si weyn u hagaajineysaa tayada natiijooyinka iyadoo aan la cabbiri karin oo keliya isku xirnaanta xiriirka, laakiin sidoo kale caan ka ahaanshaha bulshada iyo ku habboonaanta. Waxayna u qaadanayaan si dhab ah.
Maanta, waxaan ka helnay qoraalkan xiisaha leh Webmasters-ka. Waa markii ugu horraysay ee aan aragno… Maamulayaasha websaydhku iyagoo si firfircoon u codsanaya guri link Boggooda Google+ illaa koontadooda Google+:
Tani waa war wanaagsan waxaan isla markiiba ku riixnay macmiilkeenna inuu oggolaado xiriirka! Waxaa jira xiriirin dheeraad ah oo lagu baro farriinta tilmaamaysa tan Raadinta Gudaha Google Bogga leh cilad soo socota:
Hadda way ka fududdahay sidii hore inay dadku kugula xiriiraan adiga ama meheraddaada — isla markaaba Google. Dadku waxay ka heli karaan caan ah oo soo jiidasho leh Google+ bogagga iyo bogagga dhinaca midig ee natiijooyinka markay ku habboon yihiin raadintooda. Raadinta gaarka ah, sida magaca koox caan ah, waxaa laga yaabaa inaan tusno bogga Google+ kooxda.
Waxay u muuqataa in natiijada isku xirka labadooda ay tahay geesinimo cajaa'ib leh oo lagu soo saaray bogga natiijooyinka mashiinka raadinta marka magacaaga la baarayo:
Cusboonaysiinta: Falanqeeyahayaga SEO wuxuu ka helay jawharad kale… faahfaahinta sameynta isku xirka Google+ ilaa Webmasters iyadoo la adeegsanayo Google+. Tani waa madadaalo!
Tags: qoraagoogle daraygoogle + muuqaalnatiijooyinka raadintamacalimiinqalabka webmasters
Xukunka sii kordhaya ee raadinta moobiilka
Oktoobar 24, 2012 at 5:57 PM
Markaa waxa ugu weyni ma aha iskuxirka dhismaha cusub oo ay muhiim tahay in diirada la saaro baraha bulshada halkii laga horumarin lahaa xiriiriyeyaasha oo sababi kara saameyn taban halkii aad ka sareyn lahayd.